Xisbiga Moderaterna oo doonaya inuu Heshiis la galo Xisbiga Socialdemokraterna ee Sweden
HomeWararka CaalamkaXisbiga Moderaterna oo doonaya inuu Heshiis la galo Xisbiga Socialdemokraterna ee Sweden
June 17, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Hogaamiyaha xisbiga M Ulf Kristershon ayaa doonaya in uu heshiis la gaadho raysal wasaaraha Magdalena Andersson in aanay dawladdu la wareegi doonin talada haddii aanay taageero u helin miisaaniyaddeeda.
Waxa uu tilmaamay in aanu farriin cad ka helin Andersson oo arrintan la xidhiidha.
Wuxuu tixgaliyay codsigii xukuumadda labo maalmood ka hor ee ahaa inaan cod loo qaadin qabyo qoraalka miisaaniyada dheeriga ah ee Baarlamaanka
Tusaale cad oo muujinaya karti-xumada dawladda iyo hoos u dhaca awoodda dawladda.
“Ma ahan wax macquul ah in dowladdu ay ku dhegto awoodda marka siyaasaddeeda dhaqaale aysan dhaafin,” ayuu yidhi.
Wuxuu Ra’iisul Wasaaraha u jeediyay su’aashan.
Miyaynu labadeenuba ku heshiin karnaa in aanay dawladi xukunka la wareegin iyada oo aan taageero u helin siyaasaddeeda dhaqaale?
Wakaalada wararka Sweden ayaa Andersson ka soo xigatay shir jaraa’id oo uu ku qabtay baarlamaanka, “Waxaan filayaa in dad badan oo reer Sweden ah ay la yaaban yihiin waxa maalmahan ka socda baarlamaanka oo ay u arkaan wax aan la fahmi karin, waxa la dhihi karo waa in uu jiro. waxay ahayd xaalad baarlamaani ah oo aad u cakiran tan iyo doorashadii. Hamigaygu waa in aan soo dhiso dawlad iyaduna fulin karta siyaasaddeeda dhaqaale, ayay tidhi.
Xukuumadda ayaa jimcaha horgeyn doonta baarlamaanka miisaaniyadeeda dheeriga ah ee dib loo eegay ka dib markii baarlamaanka uu shalay u codeeyay diidmada miisaaniyada garabka midig iyo isbedelka xukuumadda ee gu’ga. Arrintan ayaa ka dambeysay ka dib markii ay xukuumaddu dalbatay inay diido soo jeedinta miisaaniyada mucaaradka, isla markaana ay ka gaabsatay inay waydiiso soo jeedinteeda ku saabsan miisaaniyad